फोहोर व्यवस्थापनको दिगो मोडल- विचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २, २०७६ डा. ढुण्डीराज पाठक
दशकौंदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गर्दै आए पनि आर्थिक तथा वातावरणीय रूपमा यो दिगो हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर दुई वर्षका लागि व्यवस्थापन गर्न बनाइएको सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा बाह्र वर्षभन्दा बढी समययता पूर्वाधारबिनै फोहोर फ्याँकिँदै आइरहिएको छ ।
झन्डै १०० मिटर अग्लो फोहोरको पहाडमाथि बाटो बनाई दिनहुँ सयौं गाडी धकेल्दै जेजसरी फोहोर थुपार्ने काम भइरहेको छ, त्यसबाट स्थानीय समुदायको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ नै, बर्खा सुरु भएसँगै त्यसमा पहिरो गई भयानक क्षति हुने त होइन भन्ने त्रास पनि उब्जाइरहेको छ ।
योजनाबिनाको यस्तो ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट’ का कारण काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिका झन्झन् अप्ठ्यारोमा फस्दै गएका छन् । कहिले स्थानीय समुदायको विरोधले त कहिले कमजोर पूर्वाधारका कारण पटकपटक फोहोर उठ्न नसक्दा उपत्यकाबासी पनि उत्तिकै पीडित छन् ।
हाम्रो जस्तै अन्य देशका सहरहरूले निकै छोटो समयमा सहरी पूर्वाधार लगायत फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाइमा अतुलनीय प्रगति गरेका छन् । तर हाम्रा नगरपालिकाहरूमा काम सुरु भएको यत्तिका वर्षसम्म पनि कुनै देखिने प्रगति हुन सकेको छैन ।
दिगो एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन
स्रोतमै कम्तीमा कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्टाछुट्टै भाँडामा संकलन गर्ने, छुट्टाछुट्टै ढुवानी तथा फोहोरको प्रकृतिअनुसार उपयुक्त प्रविधिद्वारा प्रशोधन गर्ने र त्यसपछि बाँकी रहेको थोरै फोहोरलाई मात्र अन्तिम विसर्जनस्थलमा व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा नै दिगो एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन हो । यो प्राविधिक रूपमा अनुकूल तथा आर्थिक एवं वातावरणीय रूपमा दिगो हुन्छ ।
दिगो एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनका लागि हरेक नगरपालिकाले गर्नुपर्ने पहिलो काम हो— दीर्घकालीन रणनीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा । हालको अवस्था थाहा पाउन फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी तथ्यांक संकलन पनि गर्नुपर्छ । पूर्ण तथा सही तथ्यांकको अभावमा उपयुक्त तथा दिगो विधि र प्रविधिको छनोट गर्न सकिँदैन अनि फोहोर व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्यनीति कार्यान्वयन गर्न पनि सम्भव हुँदैन । राम्रा नीति तथा कार्ययोजनाको सहज कार्यान्वयन हुन नसक्नु तथा राम्रा योजना असफल हुनुको मुख्य कारण नै सही तथ्यांकको अभाव हो ।
अबका दिनमा फोहोर व्यवस्थापन लगायतका सहरी पूर्वाधार नीति तथा योजना बनाउँदा यो कमजोरी सच्याउनु जरुरी छ । हालको अवस्थाको अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा फोहोर व्यवस्थापनका वास्तविक समस्या र आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसपछिको चरण भनेको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्प छान्नुपर्छ, जुन निम्नलिखित हुन सक्छन् :
(१) कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई स्रोतमैछुट्याई कुहिनेजतिलाई त्यहीँ व्यवस्थापन गर्ने । पुनर्प्रयोग गर्न सकिनेलाई त्यस्तै संकलन केन्द्रमा भेला गरी रिसाइकल गर्न पठाउने र प्रयोग नहुने थोरै फोहोरलाई सुरक्षित तवरले अन्तिम विसर्जन गर्ने ।
(२) वर्गीकरण गरिएको कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने । यसअघि नगरपालिका स्तरमा कम्पोस्ट मल कारखाना बनाउने । पुनर्प्रयोग गर्न सकिनेलाई संकलन गरी रिसाइकल उद्योगमा पठाउने । प्रयोग नहुने थोरै फोहोरलाई सुरक्षित तवरले अन्तिम विसर्जन गर्ने ।
(३) कुहिने फोहोरलाई बायोग्यास प्रविधि प्रयोग गरी खान पकाउने इन्धन उत्पादन गर्ने । पुनर्प्रयोग गर्न सकिनेलाई संकलन गरी रिसाइकलमा पठाउने । प्रयोग नहुने थोरै फोहोरलाई सुरक्षित तवरले अन्तिम विसर्जन गर्ने ।
(४) नगरपालिकाबाट उत्पादित फोहोरलाई स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटमा सुरक्षित तवरमा व्यवस्थापन गर्ने ।
उपर्युक्त विकल्पमध्ये प्राविधिक, आर्थिक तथा वातावरणीय रूपमा सबैभन्दा उपयुक्त प्रविधिको छनोट गर्नुपर्छ ।
विकल्प नगरपालिकाअनुसार फरक–फरक पनि हुन सक्छ । जस्तै— कम सहरीकरण भएका र थोरै जनसंख्या भएका नगरपालिकाहरूमा विकल्प नं. १ उपयुक्त हुन्छ ।
त्यस्तै, थोरै फोहोर उत्पादन गर्ने साना नगरपालिकामा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालन गर्न उपयुक्त नहुने हुँदा विकल्प नं. २ मा प्रयोग गर्न सकिन्छ । ठूला नगरपालिकाहरूमा विकल्प नं. ३ मा जस्तै मध्यम तथा ठूला बायोग्यास प्लान्ट (फोहोरबाट इन्धन प्रविधिको) स्थापना गरी व्यावसायिक रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । रिसाइकल हुने सामग्रीका हकमा सबै नगरपालिकाले आवश्यक संकलन केन्द्र बनाई रिसाइकल गर्न पठाउनुपर्छ ।
रिसाइकलका लागि आवश्यक उद्योग स्थापना गरिएन भने दिगो व्यवस्थापन हुन सक्दैन । हालसालै चीनले अरू देशबाट आउने रिसाइकल हुने सामग्रीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा जापान, युरोप र अमेरिकामा परेको असरबाट पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।
चीनकै अनुसरण गर्दै भारतले पनि केही महिनायता यस्ता सामग्रीको आयातमा कडाइ गर्नुले पनि नेपालले पुनर्प्रयोग तथा पुनर्चक्रीय सामग्री संकलन तथा भण्डारणका साथै रिसाइकल उद्योग स्थापना गरी सबै किसिमका सामग्री नेपालभित्रै कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
आर्थिक रूपमा दिगो कसरी बनाउने ?
फोहोर व्यवस्थापनलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने दिशामा मुख्य स्रोत नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा विनियोजन गरेको बजेटबाहेक सेवाग्राहीबाट लिने शुल्क हो । यस्तो शुल्क फोहोरको परिमाण र सेवाप्रदायकले दिने सेवाको गुणस्तरका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । सेवा शुल्कलाई वैज्ञानिक तथा न्यायोचित बनाउन नगरपालिकाले यही आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा फरकफरक दर निर्धारण गर्नुपर्छ ।
यसबाहेक फोहोर बेचेर आउने राजस्व र लाभको रकम पनि व्यवस्थापनलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर गराउने अर्को स्रोत हो । फोहोरलाई जति धेरै आम्दानीको स्रोतमा परिणत गर्‍यो त्यतिकै राजस्व बढ्ने मात्र नभई अन्तिम विसर्जन गर्ने फोहोरको मात्रा समेत कम हुन्छ ।
यसले गर्दा फोहोर व्यवस्थापन खर्च पनि उल्लेखनीय रूपमा घट्छ । नगरपालिकाले विनियोजन गर्ने बजेट क्रमशः घट्दै जब सेवा शुल्क तथा फोहोरलाई स्रोतमा परिणत गरी आउने राजस्व वा लाभ करले पूर्ण रूपमा एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन हुन्छ तब यो आत्मनिर्भर हुन्छ ।
नयाँ संवैधानिक व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नगरपालिकाको हो । दृढ इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र कार्यान्वयन गर्ने अठोट भएको नगर नेतृत्वबिना यो असम्भव छ । साथै, नगरपालिका एक्लैबाट मात्र पनि यो सम्भव हुन सक्दैन । फोहोर उत्पादकहरू सेवाग्राही भएकाले उनीहरूको सक्रिय सहभागिता तथा सहयोगबिना व्यवस्थापन प्रणाली दिगो हुँदैन ।
प्राविधिक, आर्थिक तथा वातावरणीय रूपमा दिगो फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले समुदायको सक्रिय सहभागिता तथा सहयोगमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न आवश्यक हुन्छ । यसलाई ‘४ पी मोडेल’ वा सार्वजनिक–निजी–जनसहभागिताको साझेदारी भनिन्छ । यसअनुसार नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा व्यवस्था र पूर्वाधार सञ्चालन तथा सेवाशुल्क निर्धारणको सहजीकरण तथा अनुगमन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले सेवाग्राहीको सक्रिय सहयोगमा सेवा सञ्चालन गर्छ ।
फोहोर वर्गीकरण, फोहोर व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा जनचेतनामूलक कार्यमा समुदाय सक्रिय हुनु जरुरी छ । साथै, अलमलमा परेका स्थानीय सरकारलाई दिगो एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा सहजीकरण गर्न र उनीहरूले दिएको सेवाको अनुगमनका लागि शक्तिशाली केन्द्रीय संस्था हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
लेखक भू–वातावरण इन्जिनियरिङ तथा फोहोर व्यवस्थापन परियोजनामा परामर्शसेवा तथा अनुसन्धानमा संलग्न छन् ।
प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०७:५६
श्रावण २, २०७६ सुदन अधिकारी
बुबा, यो पत्र तपाईंले पढ्नुहुनेछैन भन्ने मलाई थाहा छ । तर तपाईंसँग एउटै मोर्चामा होमिएका सहयात्रीलाई अनेक याचना गर्दा पनि नसुनेपछि बाध्य भएर मैले तपाईंलाई सम्बोधन गरेको हुँ । भौतिक उपस्थिति रहिरहेका तपाईंका सहकर्मीले मेरो लेखाइमा फगत अक्षर मात्र देखे । फलतः आफ्ना भावना सुनाउन तपाईंलाई रोजेँ ।
बुबा, तपाईंलाई ‘भरे’ पठाइदिन्छौं भनेर तत्कालीन शाही सेनाले लगेको पनि सत्र वर्ष भइसकेछ । भर्खर अक्षर चिन्दै गरेको तपाईंको कान्छो छोरो अहिले सार्वजनिक पत्र लेख्ने भैसक्यो । तपाईं आउने बाटो हेरेर बसेकी आमाले पचास वर्ष टेक्नुभो । विद्यालय पढ्दै गरेको दाइ खाडी पसेकै दशक भैसक्यो ।
तपाईं हुँदाको घर भूकम्पले क्षत–विक्षत पारेपछि हाम्रो थातथलो बदलियो, गाउँ बदलियो । तपाईंका कमान्डरहरू विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत संसदीय अभ्यासमा आएको पनि डेढ दशक भयो । यति लामो समय बित्दा पनि तपाईंलाई सेनाले पठाइदिने ‘भरे’ आएन ।आफ्नी श्रीमतीको उपचारार्थ अस्पताल गएका तपाईं आउनुभएन ।
बुबा, आफन्तहरू हामीलाई ‘अब हिन्दु संस्कार अनुसार दाहसंस्कार गर’ भन्छन् । आफ्नाबुबाको लास वा सास नपाएसम्म हामीले कसरी त्यस्तो गरौं ! छोरो हुनुको कर्तव्य मैले कहिले निभाउन पाउँला ?
बुबा, तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच भएको शान्ति सम्झौतामा छ महिनाभित्र गठन गरिने भनिएका आयोगहरू बल्लतल्ल दशकपछि राजनीतिक भागबन्डामा केवल कर्मकाण्डी रूपमा बनाइएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका मूल्य–मान्यता विपरीत बनाइएको आयोग अढाई वर्षमा उजुरी संकलनबाहेक केही नगरी विघटन भयो । बुबा, राज्यसँग तपाईंका बारेमा कुनै सूचना छैन ।
सरकारी कागजातहरूमै कहीँ ‘सहिद’ अनि कहीँ ‘बेपत्ता’ भनेर गैरजिम्मेवारीको हद नाघिएको छ । तर तपाईंको न्यायका निम्ति हामीले केही गर्न सकेनौं । किनकि यहाँ न्याय माग्नेको हविगत गंगामाया अधिकारी दम्पतीको झैं हुन्छ । सरकार र जिम्मेवार पक्षले हाम्रो यही कमजोरीको फाइदा उठाएर न्याय पाउने हाम्रो नैसर्गिक अधिकारलाई वञ्चित गरिरहेको छ ।
सरकारले हामी पीडितको संरक्षक बनेर घाउमा मल्हमपट्टी लगाउनुपर्नेमा झन् पीडा थपिदिएको छ । बुबा, हामी ज्यानको बाजी लगाएर तपाईंको न्यायका निम्ति लड्न सकेनौं । तपाईंको अभावमा क्षत–विक्षत मेरो पुस्ताको पीडा आगामी पुस्तामा पर्न नदिन हामी स्वार्थी भयौं । माफ गर्नुहोला है !
बुबा, तपाईंसँगै सर्वहारा अधिनायकत्वको सपना देख्नेहरू अहिले तपाईंझैं रहेनन् । सीमान्तीकृतलाई ‘तारा झार्ने’ सपना देखाई युद्धमा मर्न–मार्न लगाउने नेतृत्वले अन्ततः लुसुक्क चोरबाटोबाट पानीमाथिको ओभानो बनी उनीहरूको मुद्दालाई ओझेलमा पार्‍यो । कलम समाइरहेका कलिला हातमा ‘बुर्जुवा शिक्षाको भविष्य छैन’ भनी बन्दुक थमाइदिएर हजारौंको भविष्य बरबाद पार्नेहरू अहिले आएर आफ्ना सन्तानले सुविधासम्पन्न विद्यालयको प्रमाणपत्र हातमा राखिदिँदा मक्ख पर्छन् ।
‘समानुपातिक समावेशिताको जन्मदाता हौं’ भनी उल्लेख्य महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने कसम खाएको नेतृत्वलाई मन्त्रिमण्डलमा एउटा महिला राख्नसमेत धौधौ पर्छ । जनयुद्धमा आधाभन्दा बढी ठाउँ ओगटेका महिलाले राज्य सञ्चालन गर्ने अवसर पाउँदा भने सधैं वञ्चित हुनुपर्ने विवशता छ ।
एउटै मोर्चामा रहेकाहरू कोही साधारण उपचारसम्म नपाई घर न घाटको हुने अनि कोही रुघा लाग्नेबित्तिकै विदेश जाने विडम्बना अब नौलो रहेन । दसवर्षे रक्तपातपूर्ण जनयुद्धले शान्तिपूर्ण अवतरण गरेको दशक पुग्दा–नपुग्दै आफ्नै टाउकाको मूल्य तोक्नेहरूसँग कुनै वैचारिक आधारबिनै गठबन्धन बनाई दोहोर्‍याएर प्रधानमन्त्री हुने पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन कमान्डर प्रचण्डले कुनै बेला आफ्नो ‘शत्रु’ भनेर चिनाइएको एमालेसँग पार्टी एकता पनि गरिसके । तर आफ्नो नेतृत्वमा भएको जनयुद्धको औचित्य दर्साउने भनिएको चालीसबुँदे अझै पनि असरल्ल छ । भलै माओवादी नेतृत्वलाई आफ्नो जस्तोसुकै कर्म ऐतिहासिक लाग्छ !
जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफ्नो अनुकूलता हेरी कहिले प्रचण्ड बने त कहिले पुष्पकमल । पुष्पकमलबाट प्रचण्ड बने पनि ऐतिहासिक छलाङ ! प्रचण्डबाट पुष्पकमल बने पनि ऐतिहासिक छलाङ ! नैतिक, राजनीतिक, वैचारिक स्खलन पनि छलाङ ।
सहिद र बेपत्ताका सन्तानलाई राज्यले उमेरहद तोकेर प्रदान गर्ने सुविधाबाट बहुसंख्यक विमुख छन् । कैयौं सहिदका सन्तानले विद्यालयको मुख नदेखिरहेको विषम अवस्थामा पढ्नेहरूसमेत विविध कारणले नियमित हुन नसक्दा सरकारले तोकेको अठार वर्ष उमेरहद नाघ्ने हुँदा राहतबाट पूर्णतः वञ्चित छन् । अझ दुर्भाग्य, आन्दोलनका सहिद र बेपत्ता परिवारका छोराछोरी पठन–पाठन गर्ने विद्यालयको अवस्था शर्मनाक छ ।
आफ्ना सन्तानलाई सुविधासम्पन्न विद्यालयमा पढाउने नेताले आफूसँगै एउटै मोर्चामा हुँदा सहादत प्राप्त गरेका सहकर्मीका सन्तानको व्यवस्थापनमा गम्भीर पहल गर्नै सकेका छैनन् । राज्यले जनयुद्धका सहिद र बेपत्तालाई दिने भनी वाचा गरेको दस लाख पाउन ठ्याक्कै दस वर्ष लाग्यो ।
किस्ता–किस्तामा छरेर दिइएकाले सो रकम उत्पादनमूलक काममा नभई घरखर्चमै सकिएको सबै पीडितको साझा गुनासो छ । रोजगारीको व्यवस्था गरी पीडितको संरक्षक बन्नुपर्ने सरकारले ‘चारो’ मात्र छरिरह्यो ।
बुबा, कुनै पनि आन्दोलनको सफलता वा असफलता आन्दोलन सुरु गर्नुपूर्व पर्दाअगाडि देखाइएका सपना आन्दोलनकै बलबाट सत्तामा पुगेपछि केकति पूरा गर्छन् वा पूरा गराउन प्रयत्नशील रहन्छन् भन्ने कुराले निर्भर गर्छ, धेरै हदसम्म ।
जनयुद्धको अपरिहार्यता बोध गराउने भनिएको चालीसबुँदेलाई यसकै ठेकेदारहरूबाट गराइएको टीठलाग्दो अवसानको प्रत्यक्षदर्शी (वा भुक्तभोगी) जनता जनयुद्धको सफलता वा असफलताबारे धरातलीय फैसला गर्न सक्षम छन् ।
जनयुद्धको जगमा हासिल भनिएका उपलब्धिलाई तराजुको एउटा पल्लामा राखेर त्यसका लागि जनताले बगाएको आँसु, भोगेका यातना र चढाइएको रगतलाई अर्को पल्लामा राख्दा कतापट्टि भारी होला ? जनयुद्धकै कारणनेपाली समाजमा बीजारोपण भएका सामाजिक विग्रह अनि सर्वहाराका ठेकेदारमा खुल्लमखुल्ला आएको आत्मकेन्द्रित परिवर्तन नियाल्नुपर्दालाग्छ— जनयुद्ध गलत थियो ।
बुबा, के तपाईं मेरो पुस्तालाई यही ‘दिन’ उपहार दिन चाहनुहुन्थ्यो ? के यिनै प्रचण्ड र बाबुराम थिए तपाईंका आदर्श ?
बुबा, तपाईंलाई कहाँ, किन, कसरी, कुन अवस्थामा बेपत्ता पारियो भन्ने छानबिन गर्दा शान्ति प्रक्रिया भाँडिन्छ रे ! मानवताविरोधी अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्दा परिवर्तनका एजेन्डा कमजोर हुन्छन् रे !
आमा आजभोलि शिथिल भइसक्नुभो । सरकारले सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएको सुनेपछि उहाँ अचेल मलाई सोध्नुहुन्छ, ‘बाबु, बुबाको अवस्थाबारे केही थाहा पाइस् त ?’ प्रश्न सुन्नेबित्तिकै म हरेकपल्ट स्तब्ध हुन्छु, विगतमा आफूले आमालाई यही प्रश्न सोधेको क्षण सम्झन्छु ।
एक छिन रोकिन्छु, अनि आमालाई सम्झाउने कोसिस गर्छु । आफूले हालेको उजुरीमा बेपत्ता आयोगले सो पत्र ‘नं. १७२६ मा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको’ भनेकोबाहेक अरू केही भन्न सक्दिनँ म उहाँलाई । तरमलाई यो आयोगले न्याय दिँदैन भन्ने हेक्का भए पनि आमालाई सान्त्वनाका शब्दबाहेक केही भन्न सक्दिनँ ।
अचेल आमा भन्नुहुन्छ, ‘आफ्नो श्रीमानको सास वा लास मेरो सास हुँदै थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो ।’ तपाईंलाई बेपत्ता बनाउने पक्षलार्ई कठघरामा उभ्याएर वास्तविकता पत्ता लगाई आमाको एक मात्र सपना पूरा गर्नु नै मेरो पनि सपना हो ।
बुबा, आमाको यो रोदन मैले तपाईंका तत्कालीन कमान्डरलाई कैयौं पटक सुनाएँ । मलाई चिनेनन् होला सायद । तपाईं भौतिक रूपमा नभए पनि कुनै माध्यमबाट आमाको यो रोदन उनीहरूसम्म पुर्‍याइदिनुस् न !
बुबा, जहाँ जसरी भए पनि मलाई बाटो देखाइरहनुस् है !
प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०७:५४